Nasi umdwebo odumile kaMose ngemiyalo eyishumi kaNkulunkulu
Nansi umdwebo odumile kaMose ngemithetho eyishumi kaNkulunkulu, ephinde emelelwe ematje ahlanganisiwe
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Novemba 11, 2017 04: 15 Awekho amazwana
Kodwa-ke, imodeli yasekuqaleni yomqondo wamatshe amade ayihlanganisi ubuJuda; kuwuphawu olubolekwe "i-plagia emsulwa" eyayisetshenziswa ngabaphara baseGibhithe.
Ulwazi lwezokwelapha: Ubiza ukuthini udobe ngolimi lwakho?
Ngubani ohlekisa ngePrince Charles yase-England? UPrince Charles waseNgilandi wenze ukubabaza okuphezulu kwezindaba, okwaxakisa inkulungwane nomuntu oyedwa “Njengoba eneminyaka engama-71, wathi usindile ngokuyisimangaliso kuleligciwane leCorona ezinsukwini ezi-5 nje kuphela; kuyilapho abanye bewela ngokungenasisa ”… (VIDEO)
Ngo-Ephreli 5, 2020 06: 34
Ngo-Ephreli 5, 2020 00: 30
Ngo-Ephreli 5, 2020 00: 25
Ngo-Ephreli 5, 2020 00: 20